Finfinnee Protests, counting down to the 15th of December 2018. Justice for Oromo Farmers-Oromia! – Kichuu
HomeNewsAfricaFinfinnee Protests, counting down to the 15th of December 2018. Justice for Oromo Farmers-Oromia!
Finfinnee Protests, counting down to the 15th of December 2018. Justice for Oromo Farmers-Oromia!
Finfinnee Protests, counting down to the 15th of December 2018.
Justice for Oromo Farmers-Oromia!
“There is no worse blind man than the one who doesn’t want to see. There is no worse deaf man than the one who doesn’t want to hear. And there is no worse madman than the one who doesn’t want to understand.” -Ancient Proverb
Godaannisa bara kamuu Oromoon hin fayyine Wayyaaneen Bulguu dha! – https://t.co/Qvl0Sb4FEz pic.twitter.com/Ps8hnuqgcJ
— Kichuu (@kichuu24) December 12, 2018
Godaannisa bara kamuu Oromoon hin fayyine Wayyaaneen Bulguu dha!
በአዲስ አበባ ቅዳሜና እሁድ ይካሄዳል የሚባለው ሰላማዊ ሰልፍ ዕውቅና የሌለው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ
OPDOn?OPD aangoo qabattee diiftee sanuma. Jiraatee dhiiftee sanauma. Duranis otumaa ishiin shirtuu Laftii Oromoo saamamaau ture. Saamaa fi Saamsisaa turte. Ammaa immoo Aangoo qaba jetti maqaaf, garuu cubbuu asiin dura hojjatame sirressuu garuu haamilee hinhoranne. Abbay Tsehaye aangoo irraa bussaniru, garuu Hojiin inni hojjacaa ture ittuma fufee jira. “Dogoggorri” TPLF hojjattee jedhame haqamaa, sirawaa hinjiru. Sirumaa itti fufee jira. Maaltuu Oromoof Jijiramee? Namoota afaan Oromoo dubbatantuu Qaangoo irratti bahe, sanuu namoota tokkoo lama. Caasaan wayyaneen ijaarte, gubbaa qabee hamma jaalatti isuma dur hojjachu beek hojjachaa jira.
Mootumman dhufuu darbu hundi, Oromoo lafa isaa irraa buqisee, duma irraatti ofi isatifis dhabama. Garuu mottumman haaraa isa bakka bu’u immoo irra caalaa oromoo diinefata. Wayyanen Darii bakka buute, Dargii caalaa Oromoo hubde. Jarattiin amma wayyanee bakka bu’e jettu kunis Hummaataa Oromoof Bu’aa buusaa hinjirtu. Akkuma barame sana, “Oromo right is negotiable”, “Oromo and Oromo right has been always a negotiating chip” for Ethiopian leaders, old and new, come and go.
Hummanni Oromo kana ofirratti dhiisuu hinqabu. Gabrumaa hiddaan buqqisuuf qabsaauu itti fufuu qaba. Karaa cabe haayaasu.